Kianjan'ny ady totohondry (Kianjan'i Bangla Boxing) ~ Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Kianja ady totohondry (Kianjan'i Bangla Boxing)
Kianja ady totohondry (Kianjan'i Bangla Boxing), Phuket
Ny fijerena ny kianja miady amin'ny lalana Bangla. Vidin-javatra.
Kianja ady totohondry akaikin'ny morontsirak'i Patong eo amin'ny sarintany. Ahoana no hahatongavana any.
Saripika sy horonan-tsary avy amin'ny Kianjan'ny Boxing (Bangla Boxing Stadium)
Hevitra momba ny ady totohondry Thailandey ao amin'ny kianja Bangla Road Phuket (reviews Google)
Ny fijerena ady totohondry Thailandey ao amin'ny kianja Bangla Road (Tripadvisor.ru)
Ho an'ireo mpankafy ny haiady martiora, ny fitsidihana mahasarika an'i Thailand dia tsy maintsy atao
Kianja ady totohondry akaikin'ny morontsirak'i Patong eo amin'ny sarintany
Kianjan'ny ady totohondry (kianja Bangla Boxing Boxing). Sary sy horonan-tsary
Famerenana ny kianja Stadium (Bangla Boxing Stadium) (famerenana Google)
Famerenana ny kianja Stadium (Bangla Boxing Stadium) (Tripadvisor.com)